Maraoka: Mihamahazo Vahana Ny Fanoherana Ny Fetibe Mawazine · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2012 3:55 GMT
Mety hampisy fiantraikany [ar] amin'ny fikarakarana ny Mawazine, fetibe maraokana, noho ny toe-javamisy feno tolona isan-karazany manerantany sy noho krizy ara-toekarena. Fetiben'ny hira iraisampirenena fanao isan-taona ao an-drenivohitra maraokana Rabat ary hotontosaina ny 18 ka hatramin'ny 26 Mey [fr] ny Mawazine amin'ity taona ity.
Efa nisy ny mpihira iraisampirenena nandray anjara tamin'ny Mawazine teo aloha ka anisan'izany farany teo i Whitney Houston, ary tafavory ihany koa ny mpizaha tany hijery rindrankira. Tsy zavabaovao ny fanoherana ny fetibe; nanao izay hanafoanana ny Mawazine ny mpikatroka tamin'ny herintaona fa tsy nahomby. Milaza ny mpanao fihetsiketsehana fa fangalaram-bolam-bahoaka ny fetibe, ka nangatahiny mba hafindra hampiasaina amin'ny zavatra mahamaika kokoa ny tetibola ho amin'izany, saingy mamaly kosa ny mpikarakara fa avy amin'ny fanohanana sy ny vidin'ny tapakila ny ampahany be amin'ny tetibola. Araka ny fanatonan'ny andro hanombohan'ny fetibe no isian'ny fanahiana fa mety ho voasakan'ny mpanao fihetsiketsehana izy io.
Namoaka lahatsoratra ny bilaogy View From Fez :
Tsikaritra fa hiverina indray ny zavanisy teo aloha amin'ny andiany faha-11 amin'ny fetibe Mawazine (18- 26 Mey) fa ho voatsikera indray, tsy noho ny fomba na toetran'ny mpandray anjara, fa noho vola be loatra omena ny artista. Araka ny tatitra maro, Mariah Carey, heverina ho nandray vola mihoatra ny $830.000 i Mariah Carey tamin'ny famaranana ny lanonan'ny fetiben'i Rabat.
Mpampianatra anjerimanontolo Talal no nanoratra hafatra bilaogy mitondra ny lohateny hoe “Mawazine ou Mahazine” midika hoe “Mawazine (rima) sa vahoaka manjonitra”:
Raha mihamahazo vahana ny fanoherana, mitady ny fahaleovantena ara-bola ny fetiben'ny mozika hanoherana ny tsikera. Miaro i Safae El Mansouri:
Ny lahatsary manaraka avy amin'ny tahirin-kevitry ny Fanentanana Nasionaly Ho Fanafoanana Ny Mawazine taloha ela: